Ny vahaolana amin'ny olan'ny mpanjifa dia ny fandrisihana farany ho azy ireo hamita ny zavatra niainany. Ny tiako holazaina dia azo antoka - mety ho elaela kokoa ny traikefa ifandraisana (satria mila mamaly fanontaniana ny mpanjifa mba hahitana ny valiny), fa raha midika izany fa mahazo zavatra sarobidy avy hatrany izay hanampy azy ireo amin'ny fanapaha-kevitr'izy ireo hividy dia handray ny fotoana fanampiny. Ary mazava ho azy fa mazava izahay fa ny insentif dia mety amin'izay tianao irina. Mety ho sanda ara-barotra, tombana (na tatitra), tapakila na fihenam-bidy, boky e - na inona na inona irin'ny fonao.
Na dia tsy malaza aza ny endrika fitarihana statika ho an'ny mpanjifa manontany vaovao bebe kokoa, dia mbola misy orinasa an-taonina misafidy ny hamelaka ireo takelaka ireo amin'ny tranokalan'izy ireo. Ary na dia mitombo tsy mitsaha-mitombo aza ny isan'ny marika mampiasa traikefa ifanakalozana, ny marikao dia hisongadina eo amin'ireo mpifaninana aminy. Fa maninona Aleo lazaina ny mazava ho azy - tsy ny olon-drehetra no mampiasa atiny mifandray amin'ny filany hisamborana. Raha mametraka karazana traikefa ifandraisana amin'ny tranokalanao ianao dia hiavaka amin'ny mpanjifanao avy hatrany izany. Raha tokony hameno ny endrika tsy miovaova mahazatra sy miandry valiny dia mamaly fanontaniana sy zavatra misy lanjany izy ireo. Ny zavatra niainana fotsiny dia hafa be dia be.